HAN & HIMILO: SOMSITE, Himalada iyo Halabuurka Ganacsi ee Dhalinyarada – SomSite
Home / Blog / HAN & HIMILO: SOMSITE, Himalada iyo Halabuurka Ganacsi ee Dhalinyarada
saddex wiil iyo laba gabdhood. Waxaannu qabannaa xafladaha guud ahaan. Xafladaha shirkadaha waaweyn, shirarka jaraa’id, xafladaha qalinjebinta, xafladaha dadweynaha, sida dhaqaale ururinta iyo xafladaha shakhsiyeed sida aroosyada iyo wixii la mid ah” ayuu yidhi Sacad Muuse Cabdi.
Sacad Muuse Cabdi waa 25 jir dalkiisa aaminay oo aan geesna uga bixin ciiddiisa hooyo. Laba sanno ka hor ayuu ku dhaqaaqay hindisihiisii ugu horreeyay ee Ganacsi, isaga oo albaabbada u furay shirkadda SOMSITE ee adeegyada farshaxanka Computer-ka (Graphic Designing) iyo samaynta Website-yada. SOMSITE maanta waxay samaysay in ka badan 40 Website oo ka mid ah Website-yada ugu quruxda badan ee Soomaalidu leedahay.
Inkasta oo ay SOMSITE ka soo dhex baxday duruufo adag iyo xaalado kakan, maanta waxay dhashay laba shirkadood oo kale, waana hooyada Shirkadaha SOMYELLOW iyo SOMEVENTS oo iyaguna ka shaqeeya adeegyo aan hore dalka gudihiisa uga jirin.
Aasaasaha shirkadahan saddexan, Md. Sacad Muuse Cabdi oo Barnaamijka HAN IYO HIMILO ee Majalladda WEEDHSANxogwarran khaas ah siiyay ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay shirkadahani qabtaan iyo waxyaabaha mustaqbalka u qorsheysan.
I – SOMSITE:
Ugu horreyn, Sacad Muuse waxa uu ka hadlay sidii ay ku aasaasantay shirkadda SOMSITE iyo adeegyada ay wakhtigan xaadirka ah bixiso:
“SOMSITE, waxa la odhan karaa waa aabbaha SOMEVENTS iyo SOM YELLOW labadaba. Waxa la aasaasay oo aannu sii rasmi ah xafiiskeeda u furnay June 12keedii 2011, inkasta oo aannu illaa 2009kii hawsheeda soo wadnay. SOMSITE waa shirkad samaysa mareegaha Internetka (Websites), haddii ay noqoto kuwo Flash ah iyo hadii ay noqoto kuwo CSMS oo ah kuwo adduunka ku cusub ah – oo ah in qofka macmiilka ahi uu maamulan karo Website-kiisa. Haddaad garanayso WEEDHSAN oo kale waa website CSMS ah. Waxa jira Websiteyo Flash ah. Waxa jira Websiteyo HTML ah. Markaa noocayadaas kala duwan ayay samaysaa shirkadda SOMSITE. Sidoo kale shirkaddu waxay bixisaa Domains-ka iyo Hosting-ka oo ah furista iyo kiraynta godadka Website-yada oo dadkeenna dibadda looga soo samayn jiray, laakiin imika saddex daqiiqo gudahood ayaa dalka gudihiisa laguugu samaynayaa.
Waxa kale oo jira oo aannu bixinnaa adeegga Nashqadaha Computerka ama Graphic Design. Marka laga yimaaddo xagga Websiteyada, waxa jira mashaariic googoos ah oo Dawladda ama ururrada kale ee caadiga ah ama shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ayaannu u samaynaa nashqado ka duwan kuwa lagu sameeyo meelaha kale ee u furan, sida meheradaha lagu sameeyo boodhadhka. Nashqado la taaban karo, sida buuggaagta oo kale, Magazine-nada, Business Card-kii, Letterheads kii, xayaysiisyada lagu nashqadeeyo qalimada, shaadhadhka iyo garammada. Tusaale ahaan, iminka waxaan gacanta ku hayaa Magazineka WEEDHSAN oo aad arki kartid in cadadkiisii 9-aad uu muddo kooban ku soo baxayo. Waxa kale oo jira Magazine aan si toos ah u soo bixin, laakiin ka soo baxa Jaamacadda Hargeysa kulliyadda Sharciga, kaasi oo saddexdii biloodba mar soo baxa, waxa kale oo jira Magazine-no kale oo sanadkiiba mar soo baxa oo aanu samaynay.
Waxa kale oo jira mashaariic hoos yimaada SOMSITE, kuwaasi oo ay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo SEO oo ah in kor loo qaado Ranking-ka Website-ka laguu sameeyo iyo Google Ads-ka oo ah mashruuc gaar ah oo ah sidii aad Website-kaaga uga faa’ideyn lahayn, oo aad xayeysiis ku samayso si uu wax badan kaaga Caawiyo. Mashaariicdaasi waa waxyaabaha ay qabato SOMSITE.”
II – SOMYELLOW:
Sacad Muuse Cabdi waxa uu noo sheegay in markii ay shirkadda SOMSITE gu’-jirsatay, isla markaasna ay ku qanceen inay hanaqaadday, uu ku dhashay fekerkii geeddiga labaad ee hayaanka ganacsigiisa. Waa SOMYELLOW oo ah shirkad u sahlaysa dadweynaha inay helaan macluumaadka ganacsiyada iyo meheradaha dalka ka jira oo dhan iyo Diiwaan kuu fududaynaya inaad adiga oo gurigaaga jooga wax ka ogaatid xogaha ganacsi ee Somaliland.
Mar kale aan idiin kala baxo, Aasaasaha iyo maamulaha Guud ee SOMYELLOW, Md. Sacad Muuse Cabdi:
“Sannad kaddib aasaaskeedii, SOMSITE, way shaqaysay oo way hirgashay. Markaas waxa timid ‘Maxaa kale ee loo baahan yahay?’ Waxaannu ogaannay in baahi badan la qabo sidii loo suurtogelin kari lahaa in qofka gudaha ama dibadda dalka joogaa ee aan ogaan karin goobta iyo xogta meherad ama xafiis kale ku yaallo uu isaga oo gurigiisa jooga u ogaan kari lahaa. Annaga oo taas ka duulayna, ayaannu samaynnay mashruuc la yidhaahdo SOM YELLOW.
Waxaannu aasaasnay bishii saddexaad ee sannadkii 2012kii. Mashruucani waa in la diiwaangeliyo dhammaan ganacsiga Somaliland ku yaalla, waxaanu si rasmi ah u bilaabmi doonaa bisha toddobaad ee sannadkan 2013ka. Waxaannu ugu talogalnay inuu wax badan ka taro ganacsiga Somaliland oo qofku ogaan karo wax soo saarka dalkiisa yaalla halkii uu dibadda uga doonan lahaa inaannu ka caawinno. Sidoo kale in dadkeenna dibadda joogaa ay ogaan karaan ganacsiga dalka laga furan karo iyo wax soo saarka yaalla.
Waxaannu ugu talogalnay inaannu u furno Yellow Online Page, kaas oo dhammaan dalka gaadhi doona, annaga oo kala shaqeynayna Wasaaradda ganacsiga, dhawaanna rajaynayna inaannu samaynno buuggii ‘Diiwaanka Ganacsiga’ oo ah nooc la tartami kara kuwa adduunka, Websiteka laftiisu wuxuu noqon doonaa mid la tartami doona kuwa adduunka ka jira.
Sidoo kale, waxaannu xidhiidh la samaynnay shirkadaha Online Yellow Pages-ka ee caalamiga ah iyo ururkooda. Aad bay noo soo dhoweeyeen, waxaana isugu kaayo dhiman Dokumentigii rasmiga ahaa, iyadana waxaannu rajaynaynaa inay sida ugu suurtogalsan u dhammaato.”
III – SOMEVENTS:
Haddii aad Hargeysa ama magaalooyinka kale ee Somaliland joogto oo aad xaflad aroos ama meher qabsanaysid, marar badan way adkayd in munaasibaddaasi kuugu qabsoonto sidii ugu quruxda badnayd ee aad jeclaan lahayd. Dad badan ayay xaaladda qabanqaabada aroosku maanqaadday oo ay hadhaysay shucuurtii farxadeed ee ay ahayd inuu ku qaato ama ay ku qaadato habeenka malabka!
SOMEVENTS waa geeddigii saddexaad ee Shirkadahaas uu aasaasay Sacad Muuse Cabdi. Waa shirkad ka shaqaysa agaasinka xafladaha mudan ee heer Qaran illaa heer Qoys. Ganacsigan uu Sacad maamulaa waa mid ugub ku ah dadka, isla markaasna aan noociisa hore looga hirgelinnin Somaliland.
“Waxa kale oo jira Mashruuca SOMEVENTS oo aad odhan karto waa Business ka duwan qaababkii hore. Waa in qof, laba qof oo aroos ah, ama shirkad ay xafladi u dhacdo, iyaga oo faraxsan oo ku qanacsan. Ujeeddada koowaad ee aannu ka leennahay SOMEVENTS waa taasi. Afarta shay ee ugu muhiimsan ee ay SOMEVENTS qabataa waxay kala yihiin agaasinka: Xafladaha Shirkadaha waaweyn, sida shirarka jaraa’id ama daahfurka adeegyo cusub oo ay soo kordhiyeen; Xafladaha gaarka ah, sida xaflad qalin jebineed ama xaflad casho; Xafladaha dadwaynaha, sida dhaqaale ururinta (Fund raising) ama wacyigelinta oo kale; Iyo ugu dambayn, qorshaynta xafladaha aroosyada.
Waxaannu ugu talogalnay in qofka xafladda qabsanayaa aanu dareemin buuq ama culays ee uu ka mid noqdo uun dadka xafladda fadhiya. Waxaannu u taagannahay inaannu qofka farxaddiisa u rumaynno” ayuu hadalkiisa ku soo gebagebeeyay Md. Sacad Muuse Cabdi.
Si kastaba ha ahaatee, dedaalka ganacsi, halabuurka cusub iyo himilada durugsan ee ay la yimaaddeen Sacad Muuse Cabdi iyo dhalinyarada la shaqaysaa waa mid muuqaal fiican kaa siinaya waxqabadka uu qofka dhalinyarada ahi bulshadiisa ku soo kordhin karo, isaga oo aan dal shisheeye u doolin!
The Magazine – Han iyo Himilo – © Weedhsan Corporation
Shirkadda Nashqadaha ee SOMSITE oo Qiime-dhimis ballaadhan ku soo bandhigtay Carwada Ganacsiga Somalilan. July 9, 2012